Webmoney | December 2019
Fantaro ny isa napetrak'i WebMoney
Ny rafitra WebMoney dia ahafahan'ny mpampiasa manana baraingo maromaro ho an'ny vola samihafa atsy ho atsy. Ny filazana ny isan'ireo kaonty noforonina dia mety miteraka fahasarotana, izay tokony hodinihina. Fantaro ny isan'ireo tranonkala WebMoney dia manana dikan-teny maromaro mivantana ny WebMoney, ny hafainganam-pandehany dia tena hafa tanteraka.
Ahoana ny fampiasana WebMoney
WebMoney no rafitra maimaim-poana elektronika malaza any amin'ny firenena CIS. Mieritreritra izy fa manana ny kaontiny manokana ny mpikambana tsirairay, ary ao aminy misy iray na maromaro (amin'ny vola samihafa). Amin'ny ankapobeny, miaraka amin'ny fanampiana ireo kitapo ireo, ny valiny dia mitranga. Ny WebMoney dia mamela anao hividy zavatra ao amin'ny Internet, mandoa vola amin'ny serivisy sy tolotra hafa tsy handao ny tranonao.
3 fomba hiditra ao amin'ny kitapo WebMoney
WebMoney dia rafitra sarotra sy sarotra. Noho izany, maro ireo mpampiasa no tsy mahalala ny fomba hidirana ao amin'ny kitapo WebMoney. Raha mamaky ny torolàlana ao amin'ny tranonkala ofisialin'ny rafitra ianao, dia vao mainka miharihary sy tsy takatry ny saina ny valin'ny fanontaniana. Andeha hodinihintsika ny fomba telo amin'izao fotoana izao mba hiditra amin'ny kitapom-bola manokana ao amin'ny rafitra WebMoney.
Manana mari-pankasitrahana manokana sy WebMoney izahay
Mba hanatanterahana ireo fepetra fototra rehetra ao amin'ny rafitra WebMoney dia tsy maintsy manana taratasy fanamarinana ara-dalàna ianao. Manampy anao hamorona kitapo, manaisotra sy mandidy vola ary manao asa hafa. Mba hahazoana fahafahana bebe kokoa dia tsy maintsy manana fanamarinana manokana ianao. Izany rehetra izany dia vita tanteraka sy haingana.
Famindrana vola avy amin'ny WebMoney mankany amin'ny karatra Sberbank
Ireo mpampiasa miteny rosiana dia afaka mampiasa ny serivisy amin'ny WebMoney sy ny Sberbank, na izany aza, ny filàna fampindrana vola avy amin'ny rafitra voalohany amin'ny karatra faharoa dia mety miteraka olana. Famindrana vola avy amin'ny WebMoney mankany amin'ny karatra Sberbank Alohan'ny handehanana amin'ny famindrana vola, tokony manapa-kevitra amin'ny rafitra fandoavam-bola ianao.
Famindrana vola avy any Yandex.Money mankany WebMoney
Ny fifanakalozam-bola eo amin'ny rafitra fandoavam-bola sasany dia miteraka olana ho an'ny mpampiasa za-draharaha. Izany toe-javatra izany dia manan-danja ihany koa rehefa nafindra tao amin'ny rindrina Yandex mankany WebMoney. Izahay dia mandidy vola avy amin'i Yandex.Money mankany WebMoney Tsy misy fomba maro ahafahana mifanakalo eo amin'ireo rafitra ireo, ary ireo no tena resahina eto ambany.
Esory mandrakizay ny kaonty WebMoney
Amin'ny tranga sasany, manapa-kevitra ny hamafa ny kaontiny ireo mpisera WebMoney. Mety hitranga toy izany, ohatra, raha miala amin'ny firenena hafa izay tsy ampiasaina ny WebMoney. Na ahoana na ahoana, dia afaka mamafa ny WMID amin'ny fomba roa ianao: amin'ny fifandraisana amin'ny serivisy momba ny fiarovana sy fitsidihana ny Centre Certification.
Mamoaka vola avy amin'ny WebMoney ho WebMoney
Na dia heverina ho iray amin'ireo rafitra sarotra indrindra aza ny WebMoney, dia mora tsotra izao ny famindrana vola avy amin'ny kaonty iray ho an'ny hafa. Mba hanaovana izany, dia ampy ny manana kaonty ao amin'ny rafitra WebMoney, ary afaka mampiasa ny programa WebMoney Keeper. Izy io dia misy amin'ny dikan-teny telo: ho an'ny finday / tablette ary roa ho an'ny solosaina.
Fanoratana ao amin'ny WebMoney avy amin'ny scratch
WebMoney dia iray amin'ireo rafitra malaza indrindra miasa amin'ny vola elektronika. Ny ankamaroan'ny mpikirakira sy ny mpandraharaha dia mampiasa izany mba handraisana sy handray vola. Mandritra izany fotoana izany dia tsotra ny famoronana kitapo ao amin'ny WebMoney. Ankoatra izany, iray ihany ny fisoratana anarana amin'ny WebMoney.
Ampitahao ny tolotra Qiwi sy WebMoney
Rehefa mamorona kitapom-bola vaovao iray dia mety ho sarotra ho an'ny mpampiasa ny mifidy ny rafitra fandoavam-bola mety. Ity lahatsoratra ity dia hampitaha ny WebMoney sy Qiwi. Ampitahao amin'ny Qiwi sy WebMoney Ny tolotra voalohany hiasa amin'ny vola elektronika - Qiwi, noforonina tany Rosia ary manana ny taham-pahalalahana faran'izay haingana ao amin'ny faritaniny.
Famindrana vola avy amin'ny WebMoney ho Yandex.Money
Ny famindrana ny vola eo anelanelan'ireo baraingo ireo rafitra fandoavam-bola maro dia miteraka olana ho an'ireo mpampiasa. Mitranga ihany koa izany rehefa nafindra tao amin'ny Yandex Wallet ny WebMoney. Famindrana vola avy amin'ny WebMoney ho Yandex.Money Afaka mandefasana vola manelanelana ireo rafitra fandoavam-bola ireo amin'ny fomba maro. Raha mila miala amin'ny banky WebMoney fotsiny ianao, jereo ny lahatsoratra manaraka: Tombontsoa: Mampiato ny vola ao amin'ny rafitra WebMoney Method 1: Mampifandray ny kaonty
Manala vola avy amin'ny WebMoney
WebMoney dia rafitra iray izay mamela anao hiasa amin'ny vola virtoaly. Amin'ny tranonkala WebMoney, afaka manao asa samihafa ianao: mandoa vola izy ireo, mameno ny kitapo ary manala azy ireo amin'ny kaonty. Ity rafitra ity dia ahafahanao manala vola amin'ny fomba mitovy amin'ny miditra ao amin'ny kaonty. Fa ny zavatra voalohany aloha.
Top topany kaonty WebMoney
Misy fomba maro hamenoana ny tranokala WebMoney. Izany dia azo atao amin'ny karatra banky, terminal manokana ao amin'ny magazay, kaonty finday ary fitaovana hafa. Mandritra izany fotoana izany, zava-dehibe ny hahatakatra fa ny komisiona amin'ny fampindramam-bola dia ho samy hafa tanteraka, arakaraka ny fomba voafidy.
https://termotools.com mg.termotools.com © Webmoney 2019